vamwe vashandisi ve admin vanobatana nebhuruu bubble kirabhu; google & apos; s rcs inoedza yakakura meseji ficha
Kuru Nhau & Ongororo Vazhinji vashandisi veApple vanobatana nebhuruu bubble kirabhu; Google & apos; s RCS inoongorora yakakura iMessage ficha
Vashandisi veApple kutenderera pasirese vari kujoina yebhuruu bubble kirabhu. Izvi zvinoreva kuti RCS (Rich Communication Services) iri kufambiswa pasirese ichibvumira avo vanoshandisa ruoko runofambiswa neApple kujoina avo vari muU.S. RCS inotsiva yekare Android Meseji app uye inoshandisa iyo Wi-Fi kana dhata yekubatanidza pane izwi. Izvi zvinoreva kuti mameseji ane mafoto kana vhidhiyo anotaridzika zvirinani uye meseji hombe dzinogona kutumirwa uye kugashirwa.
Google inotsvaga kuenzanisa Apple & apos; s iMessages maficha, kunyanya magumo-kusvika-kumagumo kunyorera
Zvimwe zvinhu zviri chikamu cheRCS zvinosanganisira Verenga maRisiti anokuzivisa iwe kana meseji yawatumira yaverengwa, uye iwe & apos; uchazozivawo kana munhu wauri kutaurirana naye achitaipa mhinduro kumeseji iwe & apos; yauchangotumira. RCS haishande neIOS kana kunyangwe nhare dzeApple dziri kushandisa inotakura yakashambadzirwa kana yechitatu-bato mameseji maapplication. Iwe unogona kuziva kana munhu ari kune imwe mugumo wekutaurirana kwako ari kushandisa iyo nyowani mameseji chikuva neruvara rwemavara bubble pachiratidziri. Kana mapato ese ari maviri ari kushandisa RCS, iro bundu rinenge riri rebhuruu, rakafanana nemashandisiro anoita vashandisi ve iPhone kana munhu wavari kutumira mameseji ari kushandisa iOS kana Android chishandiso.
Mune blog blog yakaburitswa mukupera kwesvondo rapfuura Google yakati , 'Sezvo mafoni efoni achikura zvakanyanya, edu ekutaurirana maapplication anofanirwawo kufambira mberi kuzadzisa zvido zvedu zvinochinja. Kwemakore mashoma apfuura, takashanda neyakagadzirwa indasitiri uye vagadziri vezvigadzirwa pane akati wandei anotakura netiweki mune dzimwe nyika kuti vape maficha ekutaura muMessage zvichienderana neyakavhurika Rich Rich Services Services (RCS) standard. Zvekutaura zvinokwidziridza mameseji eSMS kuitira kuti ugone kutumira uye kugamuchira zvirinani mapikicha uye mavhidhiyo, taurirana pamusoro peWi-Fi kana data, ziva kana meseji yako ichiverengwa, kugoverana maitiro, uye kunakidzwa nekuwedzera simba uye kuita hurukuro dzeboka. Nhasi, isu tapedza kuburitsa kwedu kwepasirese kwekutaurirana maficha kuti tiite iyi yemazuva ano mameseji chiitiko uye chakabatana kune wese munhu paApple. Iye zvino chero munhu anoshandisa Meseji kutenderera pasirese1 anokwanisa kuwana zvemazuva ano chat chat kungave kubva kumutakuri wavo kana kubva kuGoogle chaiko. '
Chimwe chezvinhu izvi kuguma kupedzisa kunyorera. Neyekupedzisira, hapana, kana kunyange Google kana chero wechitatu bato, anokwanisa kuverenga izvo zvirimo zvaunotumira kuburikidza neRCS kubva kufoni yako kuenda kufoni yemunhu wauri kutumira mameseji. Pakutanga, kumagumo-kusvika-kumagumo kunyorera kuchasundirwa kunze kuenda kune beta testers kutanga mwedzi uno uye kuenderera mune rinotevera gore. Nhaurirano dzinokodzera dzinozvisimudzira dzichienda kunoguma-kusvika-kumagumo kunyorera, asi chete kana munhu ari kune kumwe kunopera kwemeseji aine maMessage akaisirwa uye maficha ehurukuro akagoneswa.
Iwe unogona kuisa iyo Messages app kubva kuGoogle Play Store nekubaya pane iyi link .
Fitbit Charge 2 uye Fitbit Flex 2 yakaburitswa mumifananidzo yekusimudzira
Galaxy S5 inoshamisa pane yedu bhatiri bvunzo yehupenyu: iyo refu-inogara-mureza ine kutsungirira kwehwendefa
10 yakanakisa chaiyo-nguva nzira mitambo yeApple neIOS
iPhone 11 Pro Max vs Galaxy Cherechedzo 10+
Zvirongwa zvakagadziriswa: Facebook Messenger matipi & manomano eIOS uye Android